:: My Little World ::: The Spanish Historical Ship (Nao Victoria) @ Vivo
Posted by Nay Nay Naing at 6/05/2010 04:09:00 PM
ခေါင်းတွေ ခေါင်းရိုက် ... အမြှီးတွေ အမြှီးရိုက်
"ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား၊ အမြီးကျက် အမြီးစား " ဆိုတာ သတိရမိတယ် :P
Sunday, June 06, 2010 12:12:00 AM
"ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား၊ အမြီးကျက် အမြီးစား " ဆိုတာ အနော်တို့ မဟုတ်ဘူး
အနော်တို့ က “ အမြီးစားအမြီးကျက် ၊ ခေါင်းစားခေါင်းကျက် “ .. မကျက်သေးခင်စားနေတာ စားနေရင်းမှကျက်ရတာ ဟိဟိ။
ကျေးဇူးပဲ နေနေ? မန်းဒေးက ဗီဗို ရောက် တော့ သင်းဘောကို တွေ့ခဲ့တယ် ? ဘာမှန်း မသိဘူး နေနေ ပြောမှ ပဲ သိတော့ တယ်
Thursday, June 10, 2010 5:15:00 AM
Friday, June 11, 2010 6:13:00 AM
အမှန်က ဘလော့တို့ ဖဘတို့လဲ တို့မလုပ်သင့်ဘူး. ကိုယ့်အရွယ် ကိုယ့်ဘာသာဘဲသီးခြားနေသင့်တယ်။ မနေနိုင်လို့ နေနေနိုင်ရယ်.................
Friday, June 11, 2010 6:14:00 AM